Yenza imigca yokuhamba komhlaba kaGoogle nge-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukuvelisa i-Google Earth Curve nge-AutoCAD
AutoCAD-AutoDeskOkufumanekaGoogle umhlaba / imephuTopography
Kwiminyaka edlulileyo ndathetha I-Plex.Earth Tools ze-AutoCAD, isixhobo esinomdla ngaphandle kokungenisa, ukudala imifanekiso imifanekiso ye georeferenced kunye ukujonga ngokuchanekileyoUnokwenza iindlela ezahlukeneyo eziqhelekileyo kwindawo yophando. Ngeli xesha ndifuna ukubonisa ukuveliswa kwemigca ye-contour evela kuGoogle Earth.
Mhlawumbi into yokuba yakhiwe yiNjineli yezoLuntu ebandakanyekayo kwezobuchwepheshe, i-Plex.Earth yenzayo kuphela abasebenzisi bezobuchwepheshe balindele kwiGoogle Earth ukusuka kwicala le-AutoCAD, ngenkxaso yeenkqubo ezingaphezulu kwe-2,000.
Yiyiphi inguqu ye-AutoCAD
I-Plex.Earth isebenza kwi-AutoCAD 2007 inguqu kwi-AutoCAD 2012, kubini i-32 kunye ne-64 bits.
Enye yezinto ezithakazelisayo kukuba akukho mingeni yokuba nguyomxholo oyintloko, Ulwahlulo lwe-CivilCAD ephethe ingxelo epheleleyo. Nangona ndicacisa, ukuba i-CivilCAD inokuvelisa imigca ye-contour kodwa ingangenisi imifanekiso okanye imifanekiso yedijithali kuGoogle Earth.
Iindlela zokungenisa amaphupha
Ubuncinane iindlela ze-4 zokungenisa amaphuzu:
Ukusuka kwigridi (kwiGridi): Kule nto, kufuneka kuphela ukubonisa amanqaku amabini kumzobo, iziphelo zoxande. Uncedo olukhulu lweli tyala kukuba iigridi ziya kujikeleziswa okanye zilungelelaniswe emgceni.
Ngendawo echaziweyo (kwiNdawo): Kule nto, kwi-AutoCAD sikhetha i-polyline, nokuba yeyiphi na imilo, iya kuyikhupha kwaye igridi iya kuba ngumgaqo wobume kumantla / emazantsi.
Ukusuka kwimboniselo yangoku: Oku kuyakuzisa isakhelo sonke sokujonga kwethu kwi-AutoCAD
Ukusuka kwindawo echazwe kwi-Google Earth: kufana neyesibini, ngokwahlukileyo ukuba indawo ichazwe kwi-Google Earth
Emva kokuba umqathango uchazwa, ungasebenzisa ileta S (Izicwangciso) okanye ngeqhosha elifanelekileyo ukukhetha uhlobo lwezinto esikulindele ukungenisa kuzo:
Imodeli yedijithali njengomhlaba
Emva koko sibonisa ukuba siyifuna kangaphi igridi, kwaye ngaphambi kokwenza oko, iyasibuza ukuba siqinisekile na. Ngokucacileyo, ngobuninzi behlabathi elinokuthatha ixesha elide, kodwa le yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu, ezinokuba zilungele Yiyiphi i-Microstation ezama ukuyenza kunye ne-Civil3D apho umfanekiso ufika kumnyama nomhlophe kwaye kungenakucaciswa kwegridi.
Emva koko, sibonisa ukuba sifuna kangaphi iirve eziphambili kunye nezesekondari. Kukwiziphi iindawo apho silindele khona izinto.
Umbala wee curve uya kuxhomekeka kwinqanaba, jonga indlela iindlovu eziveliswa ngayo usebenzisa igridi okanye indawo echazwe njengengqungquthela.
Idatha yangaphakathi inokudibaniswa kunye nophando olwenziwe kwintsimi, kwaye ngaphandle kokuvelisa i-contours kunye neendawo, ungabala kwakhona ukungafani kwimiqulu phakathi kweendawo ezimbini okanye nge-flat surface.
Ngokombono wam, isicelo esilungileyo se-AutoCAD esisebenzisana neGoogle Earth, sishiya kwi-diapers izicelo ezifana Uqhagamshelwano ekwathi nzima kuyo ukuyifaka. Utyalo-mali olulungileyo oluvelisayo, ukuba intsimi yethu kukuma komhlaba okanye uyilo.
Plex.Earth ingaba khuphela mahala, ngexesha lokuvavanywa kweentsuku ze-15.
Umhlaba ka-Google PlexEarth
5 Yintoni entsha kwi-AutoCAD 2013
I-Geofumadas, i-2011 Legacy
UJuan Lopez Jimenez uthi:
Kwimenyu ekhohlo kukho ibhokisi yencoko yababini apho ubhala khona igama lemigca yecontour kwaye uya kuba namanqaku anxulumene nesihloko. Kwakhona ngasentla, kwimenyu ephezulu unokukhangela "konke malunga ne-topography" kukho izihloko ezininzi ezidweliswe.
NDINGENZA NJENGOBA UNGAKUNENZANA NAMANYE AMANQAKU AYA KUVUMA NGI ING. I-CIVIL KUNYE NDINGENISO KWI-TOPOGRAPHY
Manuel Hernandez uthi:
Ikhasi elihle kakhulu, ngokwenene ndiye ndikhonza amanqaku amaninzi anikwe apha. Ndiyindoda kwaye ngaphambi kokuba ndiyisebenzise idesktop ye-autodesk desktop. Kulo mzuzwana ndiqala ukuziqhelanisa kunye ne-3D 2012 kunye nomncinci ngento endiyiqondayo, nangona ndilahlekile kakhulu. Ndingathanda ukwazi ukuba ngaba unolwazi malunga nokubala kwe-topographies, kuze kube ngoku ndiza nje ukudala indawo, iiprofayile kunye namacandaphindi.
Isithuba esihle kakhulu!
MapEnvelope kunye neLondon Eye